Insimbi engenasici iqubuka isithando somlilo kanye nensimbi encibilikisa ukukhishwa kwesithando somlilo
Ikhaya / I-Induction Melting Furnace / Isithandane se-Iron Iron Melting / Isibani Sokuncibilika Kwensimbi Engagqwali
Insimbi Engagqwali Incibilikisa Isibhamu
Categories: I-Furnace kagesi, Igbt tilting lokungeniswa yokuncibilikisa isithando, I-Induction Melting Furnace, I-Metal Melting Furnace, Isithandane se-Iron Iron Melting Tags: uthenge insimbi engenasici ecibilikisa isithando somlilo, ukuncibilika kwesithando sokuqothula insimbi engagqwali, isithandane sensimbi esingenasici, insimbi engagqwali incibilika, insimbi engagqwali incibilikisa isithando somlilo, insimbi engagqwali incibilikisa isithando somlilo, insimbi engagqwali engcolisa umkhiqizi wesithando somlilo, insimbi engagqwali incibilikisa intengo yomlilo, insimbi engagqwali incibilikisa ukushiswa kwesithando somlilo, isithwathwa sensimbi esinezinsimbi ezingenasici eshibilikayo
Insimbi Engagqwali Incibilikisa Insimbi | Isithandwa Sensimbi Sensimbi Sensimbi Yokuqothula Insimbi
I-1) I-Frequency Medium Insimbi engenasici ichithisa isithando somlilo
I-2) Uhlelo olugcwele lokulawula idijithali ngokunemba okuphakeme
3) Insimbi encibilikayo, insimbi, insimbi engagqwali, ithusi, i-aluminium
4) 0.15-20 amathani amandla
I-5) Ukukhishwa kwamandla okuqhubekayo, ukuqubuka okusheshayo, ukonga okuhle kagesi.
I-6) I-shell shell isithando somlilo, ukugubha amanzi.
I-3.Ukusetshenziswa: I-Medium Frequency Insimbi engenalutho ishisa ukungeniswa Isithna Isivalo esisetshenziselwa ukuqubhisa insimbi, insimbi, ithusi, i-aluminium kanye ne-alloy, inomphumela wokuqhafaza okukhulu, ukuhleleka komgogodla omuhle, ukulahlekelwa okuncane kokushisa, ukushisa okuncane okusheshayo, ukulawula okulula okushisa, kufanelekile kuzo zonke izinhlobo zensimbi yokuqubuka.
I-1) Ukukhishwa kwamandla okuqhubekayo, ukuqubuka okusheshayo, ukonga okuhle kagesi.
I-2) Isitayela se-Zero-voltage sweep-frequency isqala, ivumelanisa nezidingo zokuqala njalo.
I-3) Imisebenzi yokuvikela ephelele, njengokuvikelwa kwe-overcurrency, ukuvikelwa komkhumbi, ukuvikelwa kwamanje, ukuvikelwa kwamandla, ukuvikelwa kwamanzi, nokuvikelwa okuzenzakalelayo, imishini isebenza ngokuqiniseka ngaphansi kokuqinisekisa ukujula isivinini.
4) Kulula ukusebenza, efanelekayo yonke inqubo yokukhipha.
Isikhathi sokuncibilika kwesithando esisodwa singashesha njenge- <40 imizuzu! Isici samandla esithandweni sihlala sifinyelelwa ezweni eliphakeme kakhulu (≧ 0.96)!
Ngesikhathi se-smelting, kungakhathaliseki ukuthi isimo sesithando sishintsha kanjani, amandla okuvama okuphakathi ahlinzeka ngaso sonke isikhathi amandla okuphuma. Lokhu kusho ukuthi, ngaphandle kokulungiswa kwebhuku lomqhubi, yonke inqubo esuka ekufubeni kuze kube sekupheleni, ukunikezwa kwamandla okuvama okuphakathi kuzokwazi ukuletha amandla amakhulu esithandweni somlilo.
Inkinga yokuncintisana kwamandla kagesi (cast iron mayelana 530 kwh / T)! Uma kuqhathaniswa ne-common parallel power inverter amandla okusindisa mayelana ne-20%.
Ukufeza i-harmonic yamazwe ngamazwe kanye ne-voltage engavumelekile!
Ukusebenzisa uchungechunge lwamandla okuvuselela amandla okugcwele, konke okusebenzayo kokuvuselela kuhlale kuvulekile ngokugcwele (okulingana nomhleli wokulungisa i-diode), akukhiqizi i-harmonic ephakeme, okuyisisekelo okungcoliseki ku-inethiwekhi yamandla, akuthinti ukusebenza kwe-substation amandla okuvuselela amandla amandla.
I-design-coil ye-induction coil design inganciphisa ngokuphumelelayo ukulahlekelwa kwekhoyili.
Ukukhishwa kwe-coil kokulahlekelwa kwama-furnace ama-furnace ama-akhawunti angu-25% wamandla angqikithi, ngakho-ke ukuklama kwesayensi nokwengqondo kwe-coil kubaluleke kakhulu. Lapho siklama ikhoyili, samukela ithusi eliphakeme le-TU1 lensimbi eno-aluminium ithusi, futhi iqola le-coil lamukela ukukhwabanisa kwesiliva esiphezulu, ephethe ukulahlekelwa okuphezulu nokulahlekelwa okuncane. Ukuze uqiniseke ukuthi ukuhamba okuhamba phambili kunakho konke, izinto zokugxila zifakwe emkhatsini wokuphenduka, izinga lokuxilonga lithuthukisiwe futhi kutholakala ukusebenza kahle okukhulu kagesi kagesi.
Isitebele & Ukuvikelwa Kwemvelo
Ukukhethwa kwezinto eziphezulu eziphezulu ukuqinisekisa ukuzinza kwemishini.
①Ishicilelwe i-hose high carbon-free hose kanye ne-304 insimbi engagqwali insimbi: ihlala njalo!
②I-fibre transmission transmission inverter trigger ipulisa signal plate: ikhono elinamandla lokuphikisana nokusebenza okuzinzile
③I-high quality ekhethekile ye-platform ye-Thyristor, i-radiator-type square cooling radiator (HengYang Patent No.): sebenzisa okulula kakhulu!
④I-capacitor yomzimba: isakhiwo esizungezile, isilondolozi esiphezulu se-shell yangaphandle, esebenzisa amandla aphezulu we-magnesium aluminium alloy, anti-corrosion ngaphezulu futhi ehlala isikhathi eside.
⑤Ukucubha ibha yethusi: Okukhulu, ithusi elimnyama linganciphisa ukushisa nokushisa amandla! I-Copper sandblasted surface and anti-oxidation, i-contact surface iyasebenza kakhulu, ukubukeka akupheli futhi kwenza kube mnandi!
⑥Ukushintshwa (ukushintsha) ushintsho: lapho isithando somlilo sishintshwa noma siphendulwa, kungenzeka ukulawula ukwehluleka kwamandla kwesithando somlilo ngaphandle kokuphazamisa ukusebenza okuvamile kwesithando somlilo. Umklamo wokuphepha nokuzihlanganisa.
⑦Phatha uhlelo lokushintshanisa ukushisa (HengYang Patent No.): ukuqinisekisa ukushisa kwamanzi okupholisa emishini, nokuvimbela amanzi angaphandle angaphandle ukungena emandleni. Ukunakekela ukunciphisa ukuhluleka kwemishini.
Isithangami Sokuncibilika Kwensimbi Engagqwali sisebenzisa isivunguvungu kanye nohlangothi lokudonsa ikhava yesithando sokulondoloza ukushisa, uthuli (iringi) ngokusebenzisa umoya othile omunca uthuli, imfucuza igesi eyenziwe ngokuncibilikisa, ifinyelele futhi ithuthukise umphumela wokukhishwa kokukhishwa, ukuhlangabezana nezidingo zokuhlolwa komthelela wezemvelo ukwakheka.
Uhlobo Oluyinhloko Nezingqinamba Zezobuchwepheshe:
Ukufaka amandla (50 / 60HZ) Okukhipha amandla Amandla wezindleko zamathani (KWH / T)
Uhlobo lwe-EAF Isithando somlilo sikaMandla Amandla alinganisiwe (KW) I-voltage engenayo (V) I-line yamanje engenayo (A) Ukuvuselela inombolo ye-pulse Umthamo wokuguqula i-Rectifier (KVA) I-vol voltage (V) Amanje okuqondile (A) Imvamisa yevolumu yamandla (V) Imvamisa ephakathi KHZ Isikhathi sokukha amanzi (Min) Insimbi Ithusi elibomvu Brass Aluminum
I-GW – 0.35T 250 380 400 6 I-315 yesigaba esithathu 500 500 750 1 20-45 560 420 390 540
I-GW – 0.5T 350 380 560 6 I-400 yesigaba esithathu 500 700 750 0.8 30-50 550 410 380 530
I-GW – 0.75T 500 380 800 6 I-630 yesigaba esithathu 500 1000 750 0.8 40-50 550 410 380 530
I-GW – 1T 800 380
I-GW – 1.5T 1000 380
I-GW – 2T 1400 750
I-GW – 3T 2000 750 820 12 I-2500 yesigaba esithathu 990 1010 1480 0.5 50-70 510 370 340 490
I-GW – 5T 3000 950 1140 12 I-4000 yesigaba esithathu 1260 1190 1900 0.3 50-80 500 360 330 480
I-GW – 10T 6000 950 2280 12 I-8000 yesigaba esithathu 1260 2380 1900 0.3 50-90 490 350 320 470
I-GW – 15T 8000 950 1520 24 I-10000 yesigaba esine 1260 1590 1900 0.3 50-90 480 340 310 460
I-GW – 20T 10000 950 1900 24 I-12500 yesigaba esine 1260 1980 1900 0.25 50-90 470 330 300 450
I-GW – 30T 15000 950 2850 24 I-20000 yesigaba esine 1260 2980 1900 0.25 50-90 470 330 300 450
Ukushisa okungaphakathi kwesithando: Insimbi 1650, Isimbi yensimbi 1450, Ithusi elibomvu 1150, Brass 1000, Aluminium 700, Zinc 400
※ Umthamo we-non-stainless steel melting furnace isekelwe ngobuningi bensimbi ye-7.8 (isibalo se-aluminium yi-2.7, ngakho-ke i-aluminium isisindo esifanayo: amandla afanayo afanayo, futhi amandla adinga x izikhathi izikhathi ezingu-3 isithando somlilo)
※ Isikhathi sokuqhakazila kanye namathani okusebenzisa amandla kubalulekile ubudlelwane obunamandla nemishini ehambisanayo, isimo sezinto ezibonakalayo, ubuningi bokubambisana, ukuqeqeshwa kwabasebenzi,
※ Ngefomu elingenhla, i- "ton power ukusetshenziswa (kwh / T)" uchungechunge olusha lokusetshenziswa kwamandla, oluzodla u-15% noma ngaphezulu kokunikezwa kwamandla ku-Common parallel IF power supply
Configuration Ukulungiswa kwesisetshenziswa: ukunikezwa kwamandla okuvama okuphakathi, ikhabethe le-capacitor, umzimba wesithando somlilo (igobolondo lensimbi noma igobolondo le-aluminium), isiteshi samanzi (noma isinciphisi) uhlelo lokutshekisa, ikhebula lokupholisa amanzi njll;
※ Okungaphezulu kukhona idatha yomkhiqizo ojwayelekile, angakwazi ukuklama amandla ahlukene ngokusho kwesidingo somsebenzisi, umkhiqizo ongeyona ejwayelekile ngejubane eliqhakazile.